Aostralia · Desambra, 2012 · Global Voices teny Malagasy
Aostralia · Desambra, 2012
Firenena ao Oseania
Tantara mikasika ny Aostralia tamin'ny Desambra, 2012
Aostralia : Fatwa Manohitra Ny Andro Noely
Fivavahana29 Desambra 2012
Hatezerana amin'ny aterineto no tohin'ny vaovao navoakan'ny fatwa momba ny fanoherana ny Noely heverina fa avy amin'ny iman ao amin'ny Mosquée Lakemba Sydney.
Aostralia: Fonon-tsigara Voalohany Erantany Tsotra Misy Hafatra Mazava – Tsy Misy Mari-Pamantarana
Etazonia25 Desambra 2012
Australia’s new plain cigarette packaging law, which began on December 1, 2012, was greeted with pleasure by most onliners. An-kafaliana no nandraisan'ny ankamaroan'ireo mpiserasera ny lalàna vao nivoaka tany Aostralia mikasika ny fonon-tsigara, izay nanomboka ny 1 Desambra 2012. Mandritra izany, ireo Indostria mpanodina sigara dia nihazona mafy fa io fonosana tsy misy loko io dia hampirongatra ny varo-maizina sy ny halatra. .
Amerika Latina04 Desambra 2012
Aostralia: Ny Tenintsika Momba an'i India, Demokrasia Lehibe Indrindra Eran-tany
India04 Desambra 2012
Hoavy manao ahoana ny an'i India, izay tsy demokrasia lehibe indrindra eran-tany ihany fa hanana mponina betsaka ihany koa atsy ho atsy? Afaka mandray anjara amin'ny adihevitra momba ny Demokrasia lehibe indrindra eran-tany ao amin'ny tambajotra sosialy ao Aostralia, OurSay, ianao. Io no fisantaran'andraikitra nivoaka farany amin'ny demokrasia fampandraisana anjara an-tserasera: Manazava ny...